Amapompo endle angaphansi kwamanzi （11-22Kw）
Amapompo endle angaphansi kwamanzi （> 30Kw）
Isigaba Esingashadile Sompompo weCentrifugal
I-KQH Series Single Stage Vertical Chemical Pump
I-KQWH Series Single Stage Horizontal Chemical Pump
Ipompo ye-D Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pump, MD egqoke ukumelana nezigaba eziningi zemayini yamalahle ne-DF Corrosion-Resistant Multistage Centrifugal Pump. Ngenxa yokusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nokuklama, i-D / MD / DF inezinzuzo eziningi. Zingasetshenziswa ezinhlelweni eziningi ezahlukahlukene.
Umklamo wokwenziwa kobuchwepheshe bokuhlaziywa kwenkundla weCFD uletha ukusebenza kahle okuphezulu
I-Rotor isebenzisa izinqubo ezimbili zokulinganisela, i-static futhi inamandla, futhi ukushaywa kwe-Rotor kulawulwa ngokuqinile, ipompo isebenza kahle futhi ukudlidliza kuncane.
Amagama Abalulekile Ahlobene:
Iphampu ye-multistage centrifugal, ipompo ye-multistage evundlile ye-centrifugal, amaphampu we-multistage centrifugal, intengo yempompo ye-multistage centrifugal evundlile, ipompo lamanzi lamanzi amaningi, ikhanda eliphakeme le-multistage centrifugal pump, ipompo ye-multistage centrifugal pump, njll.
Langaphambilini I-DG / ZDG Pump Boiler Okuphakelayo